Nhau - Kudiwa kwemotokari dzemagetsi kwakasimba, Chevrolet Bolt EV yekugadzira ichawedzera ne20%
Kudiwa kwemotokari dzemagetsi kwakasimba, Chevrolet Bolt EV yekugadzira ichawedzera ne20%
Musi waChikunguru 9, GM ichawedzera Chevrolet Bolt's 20% yekugadzira mota yemagetsi kusangana zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa pamusika kudiwa. GM yakati muUnited States, Canada neSouth Korea, kutengesa kwepasirese kweBolt EV muhafu yekutanga ye2018 kwakawedzera ne40% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura.
GM CEO Mary Barra akataura mukutaura munaKurume kuti Bolt EV yekugadzira inogona kuramba ichiwedzera. Chevrolet Bolt EV iri kugadzirwa kuLake Orion chirimwa muMichigan, uye mushambadzi wayo wekutengesa wanga uchishomeka. Mary Barra akati kumusangano wakaitirwa kuHouston, "Tichifunga nezvekuwedzera kuri kudiwa kweChevrolet Bolt EV, takazivisa kuti tichawedzera kugadzirwa kweBolt EVs mumashure megore rino."
Chevrolet bhaudhi EV
Muhafu yekutanga yegore, Bolt EV yakatengesa mayuniti e7,858 muUnited States (GM yakazivisa chete kutengesa mukota yekutanga neyechipiri), uye kutengesa mota kwakawedzera ne3.5% kubva muhafu yekutanga ya2017. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Bolt's mukwikwidzi mukuru panguva ino ndiNissan Shizha. Sekureva kwemushumo weNissan, huwandu hwekutengesa kwemotokari yemagetsi yeLEAF muUnited States yaive 6 659.
Kurt McNeil, mutevedzeri wemutungamiri webhizimusi rekutengesa reGM, akadaro muchitauti, "Izvo zvinowedzerwa zvinokwana kubata Bolt EV yekutengesa kwepasi rose. Kuwedzera huwandu hwayo mumusika weUS kuchaita kuti chiono chedu chekubvisa zero munyika chiitwe padanho. ”
Pamusoro pekutengesa kwakananga uye dzimba kune vatengi, Chevrolet Bolt EV yakashandurwawo kuita Cruise Automation autopilot. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti GM yakawana Cruise Automation muna 2016.